Education | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section 1 » Education
နည်းပညာ အသုံးချ ပညာသင်ကြားခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများ
Thurs 11 Jan 2018 - 18:05
နည်းပညာ ခေတ်မှာတော့ လူနေမှုကဏ္ဍဍ အသီးသီးမှာ နည်းပညာ ဖြည့်တင်း သုံးစွဲမှုတွေ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာပါတယ်။ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ လူမှုရေး နယ်ပယ်တွေနည်းတူ ပညာရေး ကဏ္ဍဍမှာလည်း နည်းပညာ အသုံးပြုပြီး မြှင့်တင် ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ပညာရှင်တွေက ဘက်ပေါင်းစုံ စဉ်းစား ကြံဆလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝိဝါဒ ကွဲပြားမှုတွေလည်း ရှိနေဆဲပါ။
ပဲခူးတိုင်း လေးတန်း၊ ရှစ်တန်းစာမေးပွဲမေးခွန်း ကြိုတင်ပေါက်ကြား
Wed 26 Feb 2020 - 17:12
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်ကစတင်ကျင်းပနေသည့် စတုတ္ထ တန်း၊ အဋ္ဌမတန်း အစိုးရစစ်နှစ် ဆုံးစာမေးပွဲတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသ ကြီး စာမေးပွဲမေးခွန်းများ ကြိုတင်ပေါက်ကြားမှု ရှိနေသည်။
သူငယ်တန်းမှ တတိယတန်းအထိ စာမေးပွဲမရှိ
Mon 24 Feb 2020 - 21:09
သူငယ်တန်းမှ တတိယတန်းအထိ နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲမစစ် ရန်နှင့် စာမေးပွဲစစ်ပါက အရေးယူမည်ဟု မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး များက ကျောင်းအုပ်ကြီးများကို ဖေဖော်ဝါရီ နောက်ဆုံးပတ်က အသိပေးထားသည်။
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းသင်ဥပဒေကြမ်းတွင် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ အရည်အသွေး အာမခံချက်စနစ် ထည့်သွင်းထားဟု ပညာရေးဒုဝန်ကြီးပြော
Wed 19 Feb 2020 - 15:12
အရည်အသွေး အာမခံချက်ရှိသော အဆင့်မြင့် ပညာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများဖြစ် စေရေး ပုဂ္ဂလိကကျောင်းသင် ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုရှေ့ နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ် ချက်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် နေကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်း က ပြောသည်။
Wed 19 Feb 2020 - 14:10
နိုင်ငံတကာတွင် ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန် ပညာတော် သင် သွားရောက်လို သူ မြန်မာလူငယ်များအတွက် နိုင်ငံတကာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း များကပေးအပ်နေသော ပညာ သင်ဆုအစီအစဉ်များကိုယခုတစ် ပတ် နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆု အ ခွင့်အလမ်းကဏ္ဍတွင် စုစည်းဖော် ပြပေးလိုက်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားများ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက် စတင်ပေးမည်
Thu 13 Feb 2020 - 17:50
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ၁၁ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိ ကျင်းပ မည့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများကို ဖေ ဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် စတင်ထုတ်ပေးမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနက ယမန်နေ့တွင် ကြေညာသည်။
လုပ်ငန်းခွင်အကြို မူလတန်း ဆရာအတတ်ပညာ သင်တန်းသား ၁၀,၀၀၀ ကျော် ခေါ်ယူမည်
Wed 12 Feb 2020 - 12:07
မူလတန်းပြအဖြစ်ခန့်မည့် လုပ် ငန်းခွင်အကြို မူလတန်းဆရာ အတတ်ပညာသင်တန်း (PPTT)အတွက် သင်တန်းသား ၁၀,၀၀၀ကျော်ခေါ်မည်ဟု အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က ပြောသည်။
တက္ကသိုလ်အချို့တွင် အချိန်ပိုင်းနည်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမများ ခန့်အပ်မည်
Wed 12 Feb 2020 - 12:05
တက္ကသိုလ်အချို့တွင် အချိန်ပိုင်းနည်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမများကို တစ်ရက်လျှင် ကျပ် ၃,၆၀၀ နှုန်းဖြင့်ခန့်အပ်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန က ခွင့်ပြုထားပြီး မန္တလေး နိုင်ငံ ခြားဘာသာတက္ကသိုလ်နှင့် မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ်တို့က အချိန်ပိုင်း နည်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမများ ခေါ်ယူနေသည်။
သင်ရိုးသစ်သင်တန်းတက်ရောက်ရေး ကန့်သတ်ချက်အချို့နှင့် မကိုက်ညီပါက မလွှတ်ရန် အခြေခံပညာဦးစီးညွှန်ကြား
Wed 12 Feb 2020 - 12:03
လာမည့်ပညာသင်နှစ်၌ သင်ရိုး သစ်ပြောင်းမည့် အခြေခံပညာအတန်းများအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ ဆရာ၊ ဆရာမ လေးသိန်းခွဲကို သင်ပြနည်းသင်တန်းပေးမည်ဖြစ် ပြီး ကျန်းမာရေးမကောင်းသူ၊ အငြိမ်းစားယူရန် နီးကပ်သူနှင့် အခြားသင်တန်းရှိသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများအား သင်တန်းသို့မလွှတ်ရန် အခြေခံပညာဦးစီးဌာန က ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်တွင် ညွှန် ကြားထားသည်။
ဒသမတန်းသင်ရိုးသစ် သင်ပြနည်း သင်တန်းအတွက် အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ ၄,၀၀၀ ကို ပို့ချမည်
Wed 12 Feb 2020 - 12:00
၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင်နှစ်တွင် သင်ရိုးသစ်ပြောင်းမည့် ဒသမ တန်း (Grade-10)အတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် သင်ပြနည်းသင်တန်း၌ အထက် တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ ၄,၀၀၀ ကို သင်တန်းပေးရန် အခြေခံပညာဦးစီးဌာနက စီစဉ်နေသည်။
ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည် အစိုးရက စိတ်ကူးတည့်ရာလုပ်နေခြင်းမဟုတ်ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြော
Sun 09 Feb 2020 - 21:13
ပညာသင်ကြားရေး စနစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည် အစိုးရ က စိတ်ကူးတည့်ရာလုပ်နေခြင်းမ ဟုတ်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြော သည်။
အခြေခံပညာတွင် သင်ရသော ဘာသာရပ်အားလုံးကို ပြည်နယ်များရှိ တက္ကသိုလ်၌ ဆက်လက်သင်ခွင့်ရရေး ရခိုင်အမတ် ဆွေးနွေး
Fri 07 Feb 2020 - 19:11
အခြေခံပညာ အဆင့်တွင် သင်ယူခဲ့ရသည့် ဘာ သာရပ်အားလုံးကို ပြည်နယ်အ သီးသီးရှိ အဆင့်မြင့်ပညာတက္က သိုလ်များ၌ ဆက်လက်ဆည်းပူး ခွင့်ရရေး မဖြစ်မနေအကောင်အ ထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရ ခိုင်အမတ် ဒေါ်ထုမေက တိုက် တွန်းသည်။
မသင်မနေရအဖြစ် စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ၊ ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာတို့ကို Grade-10 သင်ရိုးသစ်တွင် သတ်မှတ်
Wed 05 Feb 2020 - 12:53
လာမည့် ၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင်နှစ်ဇွန်လ ကျောင်းဖွင့်ချိန်ကစကာ အခြေခံပညာ အထက်တန်း Grade-10 ကို သင်ရိုးသစ် စတင်ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ပြီး စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ၊ ဘဝတွက်တာကျွမ်း ကျင်စရာဘာသာရပ်တို့ကို မသင် မနေရသတ်မှတ်ထားသည်။
စင်ကာပူ-မြန်မာ သက်မွေးသင်တန်းကျောင်း ၀င်ခွင့် စတင်ခေါ်ယူ
Wed 05 Feb 2020 - 12:51
စင်ကာပူအစိုးရနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ထား သော စင်ကာပူ-မြန်မာ သက်မွေးသင်တန်းကျောင်းမှ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဘာသာရပ်၊ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ် သင်တန်းများအ တွက် သင်တန်းဝင်ခွင့် စတင်ခေါ် ယူနေသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွင် မသန်စွမ်းများကို ဖြေဆိုချိန်ပိုပေးမည်
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွင် မသန်စွမ်းကျောင်းသားကျောင်း သူများအား သတ်မှတ်ဖြေဆိုချိန် ထက် မိနစ် ၃၀ ပိုကာ ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီး ဌာနက သတ်မှတ်ထားသည်။
လုပ်ငန်းခွင်အကြို မူလတန်းဆရာ အတတ်ပညာသင်တန်းကာလကို ၁၀ သို့ တိုးဖွင့်
Wed 05 Feb 2020 - 12:49
မူလတန်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်မည့်လုပ်ငန်းခွင်အကြို မူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း (PPTT)ကို ယခင်က ပညာသင်ကာလ ခြောက်လသာ သတ်မှတ်ခဲ့သော် လည်း ယခုနှစ်ကစကာ ပညာသင်ကာလဆယ်လအဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
စာသင်ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသားများဦးဆောင်သည့် အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရေးအဆို လွှတ်တော်၌ဆွေးနွေးမည်
Mon 03 Feb 2020 - 21:10
အခြေခံပညာ နှင့်အဆင့်မြင့် ပညာစာသင် ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ဦးဆောင်သည့် အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရေးကို ၂၀၂၀ -၂၁ ပညာသင်နှစ်ကစ၍ အကောင်အထည်ဖော်ရန် အစိုးရ အားတိုက်တွန်းကြောင်း ရွှေပြည် သာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်ဦးဉာဏ်လင်း၏ အဆို ကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေး ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အဝေးသင်ပထမနှစ် ကျောင်းအပ်လက်ခံရက်များ တိုးမြှင့်
Sun 02 Feb 2020 - 19:39
၂၀၁၉ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်ပြီး အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် သင်တန်းဝင်ခွင့်ရသူ များ၏ ကျောင်းအပ်လက်ခံရက် များကို သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များက ၁၅ ရက်မှ တစ်လအထိ တိုးမြှင့်ပေးထားသည်။
အခြေခံပညာစာမေးပွဲကာလပြင်ဆင်ခြင်းကို ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသားများ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
Fri 31 Jan 2020 - 19:09
အခြေခံပညာစာမေးပွဲ ကာလပြင်ဆင်ခြင်းကို ကန့်ကွက် ကြောင်း ရန်ကင်းပညာရေးကော လိပ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂက ဦးဆောင်ပြီး ရန်ကင်းပညာရေး ကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်း သူ ၄၀၀ ခန့်က ရန်ကုန်မြို့၌ ယမန်နေ့တွင် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ သည်။
အခြေခံပညာစာမေးပွဲကာလပြောင်းမည့်မူဝါဒကို ကန့်ကွက်ကြောင်း လက်မှတ်ရှစ်သောင်းကျော်ရထားပြီဟုဆို
Fri 31 Jan 2020 - 19:06
အခြေခံပညာစာမေးပွဲ ကာလပြောင်းမည့်မူဝါဒကို ကန့် ကွက်ကြောင်း လက်မှတ်ရှစ် သောင်းကျော်ရရှိထားပြီး ထိုမူဝါ ဒကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြင် ဆင်မပေးလျှင် ကန့်ကွက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ အရှိန်မြှင့်မည်ဟု ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းသုံးခုက ယမန်နေ့တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားသည်။
ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွင် စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာဘာသာရပ် ဖြေဆိုမည့်သူ ၁၁ ဦးရှိ
Wed 29 Jan 2020 - 19:41
ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် ခွင့်စာမေးပွဲတွင် စိတ်ကြိုက်မြန် မာစာဘာသာရပ်ဖြေဆိုမည့်သူ ၁၁ ဦးရှိပြီး ခြောက်နှစ်အတွင်း ယခုနှစ်တွင် ဖြေဆိုသူဦးရေအများ ဆုံးဖြစ်သည်။
တရုတျကလုပျငနျးတှကေို မွနျမာနိုငျငံကို ရှဖေို့ စိတျဝငျစားနေ
ငှကွေေးခဝါခမြှုတိုကျဖကျြရေး အားနညျးတယျလို့ စှပျစှဲခကျြကို ဝနျကွီးဌာန အကွိတျအနယျဖွရှေငျးနရေ
ရနျကုနျမှာ ခိုငျမာတဲ့ ရှဈေေးကှကျလုပျဖို့ ဝနျကွီးခြုပျတိုကျတှနျး
ဒျေါထုမေ ( ရခိုငျပွညျနယျ မဲဆန်ဒနယျ - ၁၁ )
ဝူဟန်ပြန်ကျောင်းသားများ နေအိမ်တွင်လည်း ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရန် ဝန်ကြီးပြော
ရတနာပုံဈေး(Sky Walk) ၁၂ နှစ်ခန့်အကြာတွင် ဒုတိယအကြိမ် မီးကြီးလောင်
ဖိလစ်ပိုင်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မြန်မာများ သတိရှိရန် သံရုံးထုတ်ပြန်
အောင်တံခွန်ရေယာဉ်ပေါ်မှ ကပရဝန်ထမ်း ၁၆ ဦးကို AA ဖမ်းဆီး
ဦးဝှေ့တင်းကို AA ဖမ်းဆီးထားခြင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရပါစေကြောင်း ရွှေပါရမီတောရဆရာတော် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့
No. 2381, THURESDAY, FEBRUARY 27, 2020
အတွဲ (၁၈)၊ အမှတ် (၅၁)
No. 2380, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2020
No. 2379, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020
No. 2378, MONDAY, FEBRUARY 24, 2020
No. 2377, SUNDAY, FEBRUARY 23, 2020
No. 2376, SATURDAY, FEBRUARY 22, 2020
No. 2375, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2020
No. 2374, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2020
အတွဲ (၁၈)၊ အမှတ် (၅၀)
အတိတ်သည် သင်ခန်းစာယူရန်သာဖြစ်ပြီး တွေးကြောက်နေရန်မဟုတ်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်အမတ်ပြော
Thu 27 Feb 2020 - 13:26
ဝူဟန်က မြန်မာနိုင်ငံသား နှစ်ဦးကို အိန္ဒိယလေတပ်က ခေါ်ယူပေး
Thu 27 Feb 2020 - 13:19
ယူရိုပါလိဂ်တွင် ဘရဂ်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မှဖြစ်မည်ဟု ဆိုးလ်ရှားပြော
Wed 26 Feb 2020 - 21:28
အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကို COVID-19 စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် ဝေဘာဂီတွင်ထားရှိ
ဂျပန်ရောက် မြန်မာများ ကျန်းမာရေးညွှန်ကြားချက်များ လိုက်နာရန် သံရုံးထုတ်ပြန်
Wed 26 Feb 2020 - 21:27
အရန်မီးသတ် ဦးမော်စီကို ဂုဏ်ပြုကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးပြော
မကြာမီရောက်ရှိလာမည့် ပထမဆုံးရေငုပ်သင်္ဘော တပ်တော်ဝင်အခမ်းအနားကို သီးခြားပြုလုပ်မည်
Wed 26 Feb 2020 - 21:18
ဘင်္ဂါလီများအားကူညီရန် ကြားဝင်ဖြေရှင်းရေးကြေညာချက်ကို မော်လဒိုက်က ICJ သို့ တင်သွင်းမည်
Wed 26 Feb 2020 - 21:17
ပုဒ်မ ၅၉(စ)ကို တပ်မတော် စတင်ဆွေးနွေး
Wed 26 Feb 2020 - 21:15